Mhirizhonga: Mapurisa Anoda Kudzidziswa nezvehurema
Misa Mhirizhonga: Mapurisa Anoda Kudzidziswa pavanhu Vakaremara
Posted on Dai 7, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Mapurisa Akanyatsodzidziswa Kutarisana Nevanhu Vakaremara Here?
Mapurisa ese muUnited States anofanirwa kunyatsodzidziswa kubata mamiriro nevanhu vakaremara. Isu takaona nguva pfupi yadarika kuti vamiriri vemitemo havana dzidziso yakakwana uye ruzivo rwekuyedza mamiriro aya nenzira kwayo.
Nekuda kwekushomeka kwekudzidziswa, mhirizhonga inoshandiswa kakawanda kupfuura zvakafanira.
Musi waApril 29, iyo Seneti Judiciary Committee akasangana kuti vakurukure kutevedzwa kwemutemo-kuita remara MaAmerican.
Dare, rinotungamirwa nedemokrasi Senator Dick Durbin anobva kuIllinois, vakasangana vachirwisa kumashure kwekufa kwa James Boyd, murume asina pekugara anga achipinda nekubuda muzvipatara zvepfungwa, akapfurwa ndokufa nemapurisa muAlbuquerque, uye Ethan Saylor, murume ane Down syndrome akadzipwa zvekufa zvekusungwa maoko nema-off-duty vamiriri vanoshanda sevachengeti munhandare yemabhaisikopo yeMaryland.
Ivo vangori vaviri vevakawanda vanhu vane hurema hwepfungwa kana hurema akaurayiwa nevateereri vemitemo.
Mukutarisana nerufu urwu nevamwe vazhinji, maseneta nezvapupu vese vakapokana kuti chimwe chinhu chinofanirwa kuitwa.
Mhinduro dzakataurwa dzakasanganisira yakawedzera mari yeCrisis Intervention Teams (CIT) kudzidziswa uye iyo Justice uye Mental Health Collaboration Act. Izvi zvaizoita kuvandudza kuwana rubatsiro rwehutano hwepfungwa hwevanhu vanosangana nehurongwa hwekutongwa kwematsotsi. Pamusoro pezvo, izvi zvichaita ipa mutemo ekumanikidza mapurisa maturusi ekuziva uye kupindura kumatambudziko ehutano hwepfungwa.
Nepo kutongwa kwakanangana nekutambudza, chimiro chepamusoro, uye nenjodzi dzakadai seyaBoyd naSaylor, kukura kwedambudziko kunosvika kune angangoita marudzi ese kuremara.
Kusangana nemapurisa vatorawo mhirizhonga isiri madikanwa kuvanhu vakaremara vasiri vepfungwa kana vehungwaru, kusanganisira mamiriro izvo zviri zvemuviri kana zvekunzwa:
In 2008, Ernest Griglen akabviswa mumotokari yake nemapurisa aifunga kuti akadhakwa, akabva arohwa. Griglen aive, muchokwadi, akanyanyisa, asi ane chirwere cheshuga uye aive mune insulin kuvhunduka. Tichitarisa nezvinobuda munhau chete, vanhu vane chirwere cheshuga vari kazhinji kukanganisa sekutyisidzira dhakwa.
Muna 2009, Antonio Love akanzwa kurwara ndokupinda muDollar General chitoro kunoshandisa imba yekugezera. Nguva yakafamba uye haana kubuda, saka maneja wechitoro akadana mapurisa. Iwo mapurisa akagogodza pamusuwo wemba yekugezera, akamuraira kuti abude, asi havana kupindurwa. Vakapfapfaidza mhiripiri yepasi pasi pemusuwo, ndokuvhura nechairi yetai, ndokuzora Rudo kakawanda. Rudo matsi. Akatadza kunzwa mapurisa. Zvekare, kana nhau mishumo chero chiratidzo, matsi anowanzo zvakanyanya kubatwa seisingateereri uyekushambadza kana kurohwa nemapurisa.
In 2010, Garry Palmer aityaira achienda kumba kubva kushanyira guva remukadzi wake apo imbwa yakamhanya pamberi petiraki ndokurohwa. Palmer akataura nezve tsaona sezvaaifanira kuve. Nekudaro, iye aishora mazwi ake uye achidedera uye akazopedzisira asungwa nekuda kwekutyaira akadhakwa. Palmer ine cerebral palsy.
MunaJanuary 2014, Robert Marzullo akamhan'ara kumatare kududza bhatiri, kuwandisa simba, kuiswa mutirongo kwenhema, kubatwa zvisiri pamutemo uye manejimendi mutoro kurwisana neguta reHamden, Connecticut pamwe nedhipatimendi remapurisa. News reports zvinoratidza kuti Marzullo akavhiringwa nemapurisa maviri apo akabatwa pfari mumotokari yake.
[hr] [btn link = "http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/05/kusanzwisisa-kuremara-kutungamira-kumapurisa-mhirizhonga / 361786 / "color =" grey "size =" size-m "target =" _ blank "]
Verenga Yakazara Yekutanga Chinyorwa
Mapurisa Akanyatsodzidziswa Kuti Vatarise Nevakaremara Here?
Vacheche Boomers Kurarama Nekushungurudzika
Maitiro EGoPro YeVashandisi Vemavhiri